Ifulethi Lobuciko "I.Rossi-Sièf" 29щ - I-Airbnb
Ifulethi Lobuciko "I.Rossi-Sièf" 29щ
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Okt 13.
Indlu yethu ise-Stella sul Renon, enye yezindawo eziphakeme ezinhle kakhulu e-Europe. Ngaphezu komndeni ohlalayo, inikeza indawo yamakhaya okuvakasha angu-4 kanye nendawo yokupaka evikelwe. Wonke amafulethi anombono omuhle wophawu lwentaba lwe-Alto Adige, Sciliar.
Ifulethi Lobuciko "I.Ross-Sièf" lingathatha abantu abangu-2. Iqukethe ikamelo lokulala elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa, ikamelo lokugezela elineshawa nendlu yangasese kanye nendawo yokuhlala enekhishi + uvulanda.
Ifulethi Lobuciko liyikhaya eliphelele lobuciko nabathandi bemvelo. Phumula endaweni enhle futhi uzungezwe yimvelo engcolile! Itholakala endaweni engokwemvelo enombono oyingqayizivele wamaDolomites, indawo ekuzungezile ikumema ukuthi uphumule futhi ululame. Njengoba igama lisikisela indawo "i-Stella", kusukela lapha isibhakabhaka sasebusuku esinezinkanyezi singabonakala kuwo wonke ubukhazikhazi baso.
Ukusuka lapha, ungathatha uhambo oluhle, njenge-pyramids yomhlaba noma imnyuziyamu yezinyosi. Ebusika, i-Renon eseduzane iyindawo ekahle kakhulu yomndeni wonke, futhi i-Lake Costalovara ikumema ukuthi usikebhe ebusika futhi ubhukude ehlobo.